Karaiba: Fanarahana an’i “Earl” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 01 Septambra 2010 17:02 GMT
Tonga indray ny vanim-potoanan'ny tafio-drivotra. Ka ireo mpitoraka blaogy any amin'ny faritra, efa tratran'ny rivodoza mahery dia mahery taloha, dia manara-maso akaiky ny zotran'i tafio-drivotra Earl, izay nosokajiana ho tafio-drivotra sokajy faha-3. Mandritra ireo 36 hatramin'ny 48 ora ho avy dia eritreretina handalo any amin'ireo nosy Virijiny Amerikana sy Porto Rico izy, ankoatr'ireo nosy hafa.
Na dia miforona aza ny famantarana toetr'andro vaovao any amorontsirak'i Barbados, afa-tahotra ny Barbados Free Press fa nandingana azy fotsiny i Earl:
Ho avy ny orana mandritra ny andro maromaro any Bajan noho ny tafio-drivotra Earl, fa voadona mafy kosa ireo mpifanila amintsika any Avaratra.
Ny vaovao tsara ho an'i Barbados dia tsy naharava trano indray ny tafio-drivotra. Ny vaovao ratsy dia ny fiforonan'ny tafio-drivotra hafa indray any atsinanana ary 80% ny mety hiakarany ho ho tafio-drivotra manana anarana ao anatin'ny 48 ora.
Mora ho an'ireo Barbadiana ny mampitony saina satria tsara vintana isika na notahiana nandritra ny fotoana ela isaky ny misy tafio-drivotra mahery mandalo.
Toa avotra ihany koa i Kiobà, ; manoratra ny Havana Times:
Niha-nahery ny tafio-drivotra Earl tamin'ny Alatsinainy raha izy nandao ireo nosy Leeward avaratra ka nandeha ho any amin'ireo nosy Virijiny. Tsy misy tokony hampatahotra ny faritra Kiobàna noho izany.
Mitatitra ny Repeating Islands fa ny Foibem-pirenena Amerikana misahana ny Tafio-drivotra dia niteny fa “toa hihamahery hatrany ” i Earl:
Maminavina ireo mpamantatra toetr'andro ao amin'ny Foibem-pirenena misahana ny Tafio-drivotra fa hijanona eny amorontsirak'i Etazonia ilay tafio-drivotra, hizotra manodidina an'i Etazonia sy Bermuda manomboka ny Alarobia hatramin'ny Zoma…
Hatreto kosa aloha ireo mpitoraka blaogy avy any amin'ireo nosy Virijiny no tena mavitrika, mety hoe noho ry zareo akaikin'ny làlan'i Earl. Milaza ny News of St. John:
Ampiomanana ny tompon-trano, mpiandraikitra “villa”, ary mpandraharaha tamin'ny Alakamisy lasa teo, namoaka ireo entana tao anatiny ary namatotra ireo sisa tavela. Henonao tamin'ny zoma teo ny fipaipaikan'ny maritoa sy ny basy famantsihana. Mitatitra ny StormCarib fa nofoanana avokoa ireo sidina mivoaka ny St.Thomas tamin'ny Alatsinainy.
Ao amin'ny lahatsoratra iray hafa izy dia mampiakatra horonatsary ary mitatitra:
Nihaniadana ny fandehan'i Earl tamin'ny alina, ka nampihemotra tokony ho 12ora eo ho eo ny fahatongavany. Milaza ny foibem-pirenena misahana ny rivodoza fa handalo any avaratra-atsinanan'i St.John ny ivon'ny rivodoza amin'ny 6ora hariva any ho any.
Tapaka ny herinaratra any amin'ny helodranon'i Cruz. Nitsahatra tsy nitati-baovao ny St. John Spicecam tamin'ny 7ora maraina tany ho any. Ity no sary farany. Somary manjavozavo ihany. Notsotsofin'ny rivotra ny kamera. Mahagaga ny isan'ireo sambo mbola mijanona eo an-tseranana. Firy eo ho eo no ho simba ka hiampatra eny amorontsiraka?
Manambara ny fanampim-baovao taorian'io fa “tsy misy raisina ny “quai” ao amin'ny helodranon'i Cruz.”
Mandritra izany, ny mpitoraka blaogy namana Live De Life dia mikarakara fitaovana ary miomana araka izay azo atao amin'ny fahatongavan'i Earl, ka mitatitra:
Miaritra ny sisin'i Earl izahay izao maraina izao. Rivotra mahery sy orana mivatravatra. Tapatapaka ny herinaratra. Dia izao misy kotroka sy tselatra. Soa ihany fa tsy mandeha miasa izahay androany.
Hanome fanampim-baovao hatrany izahay amin'ny fivoaran'ny toe-javatra.
Izao fotsiny no nataon'ny News of St. John : ny lahatsoratra farany indrindra avy amin'ny mpitoraka blaogy dia milaza fa manavatsava nosy i Earl ; ny fanampim-baovao iray aza ahitàna horonantsary “avy amin'ny St. John nalaina tamin'ny 8ora maraina teo ho eo.”
Hanome fanampim-baovao ny Global Voices rehefa mivoaka izany.
Ny sary famantarana ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity, “Hurricane Earl 1″, dia avy amin'i I Am Rob, ampiasaina eo ambany fiarovana Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 2.0 Generic license. Tsidiho ny raki-tsary Flickr an'i I Am Rob.